एजेन्सी । अनिद्राका कारण शरीरमा कर्टिसोल हर्मोनको उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । जसले शरीरमा चिनीको मात्रा बढाउने काम गर्छ । त्यसैले राम्रोसँग निद्रा नपर्ने व्यक्ति मधुमेहको जोखिममा हुन्छन् । यस्ता छन् अनिन्द्राका कारण शरीरमा देखिने समस्या : १) अनिद्राका कारण...
यात्रा गर्दा शरीरका इन्द्रीयहरु आँखा, कान आदिले सन्तुलित ढंगबाट आ–आफ्नो कार्य गर्न नसक्दा मोसन सिकनेस अर्थात यात्राजन्य वान्ता उत्पन्न हुन्छ । मोसन सिकनेस पनि व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक हुन्छ । कसैलाई सवारी साधन बस, ट्याक्सी, हवाईजहाज...
सेक्स बढी आनन्ददायी कुन उमेरमा होला ? यसबारे एक अध्ययनले नयाँ कुरा पत्ता लगाएको छ । अनलाइन मार्फत एक यौन खेलौना उत्पादक कम्पनीले गरेको अध्ययनले महिलाहरुले २८ वर्षको उमेरमा गरिने सेक्सबाट बढी आनन्द उठाउँने तथ्य...
आफ्नो मिर्गौला बिग्रिरहेको छ भन्ने कुरा सुरुमै त्यत्तिकै थाहा हुँदैन । जतिबेला थाहा हुन्छ त्यतिबेला मिर्गौला धेरै बिग्रिसकेको हुन्छ । र, जसको उपचार अत्यन्त कठिन बनिसकेको हुन्छ। तसर्थ रोग लाग्नुभन्दा पहिल्यै मिर्गौला जोगाउनेतर्फ ध्यान...
नेपालमा यौनका विषयमा खुलेर कुरा गरिंदैन । यौनका बारेमा जति चर्चा गरिन्छ, यात त्यसलाई असाध्यै जटिल वनाईन्छ, या अति नै हलुका । फलस्वरुप यो कतिपयका लागि चर्चा गर्न अयोग्य विषय भएको छ भने धेरैका लागि...
टन्सिल भनेको घाँटीको माथिल्लो भागमा रहेको टन्सिल नामको ग्रन्थी सुन्निने, रातो तथा तातो हुने (इन्फ्लामेसन) समस्या हो । यो एक प्रकारको गला सुन्निने समस्या (फ्यारिन्जाइटिस) हो। टन्सिल भयो भनेर डाक्डरकोमा हतारिएर जानु पर्छ भन्ने छैन...
ज्योतिषको आधारमा आज हामी तपाईंलाई शरिरका यस्तो स्थान बताउँदैछौं जहाँ कोठी हुनु निकै राम्रो र शुभ मानिन्छ । १. भाग्यको कोठीः मानव शरिरमा प्राकृतिक रुपमा विभिन्न स्थानमा कोठी हुने गर्दछन् । केही मानिसहरुलाई शरिरको यो कोठी...
सरकारी स्वामित्वमा तीनवटा मेडिकल कलेज स्थापना हुँदै
काठमाडौँ । सरकारले तीनवटा मेडिकल कलेज खोल्ने तयारी गरेको छ । सरकारले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि दरबन्दी र अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले महोत्तरीको बर्दिवास, रुपन्देहीको बुटवल र...